उपत्यकामा संक्रमित भेटिएपछि कोरोना परीक्षण गराउने बढे ! सेयर गरौ «
उपत्यकामा संक्रमित भेटिएपछि कोरोना परीक्षण गराउने बढे ! सेयर गरौ
Published : 15 April, 2020 7:38 pm
उपत्यकामा कोभिड-१९ स‌ंक्रमण देखिन थालेपछि नमुना परीक्षण गराउने बढेका छन् । उपत्यकामा मङ्गलबार दुई जनामा संक्रमण देखिएपछि विदेशबाट आएकाहरु आफैँ अस्पतालमा पुगी नमुना परीक्षण गराउन थालेका छन् । उपत्यकामा अहिलेसम्म पाँच जनामा संक्रमण देखिएको छ । टेकुस्थित शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालका निर्देशक डा. सागर राजभण्डारीले उपत्यकामा मङ्गलबार एकै पटक दुई जनामा संक्रमण देखिएपछि अस्पतालमा आएर परीक्षण गराउनेको संख्या बढेको बताए । उनका अनुसार, पहिले दैनिक १०-१५ जनाको परीक्षण गर्ने टेकु अस्पतालमा अहिले ३० जना आउने गरेका छन् ।
घरबेटी र समुदायले नै विदेशबाट आएका मानिसलाई संक्रमण भए/नभएको रिपोर्ट ल्याउन भनेपछि ती मानिसहरु अहिले टेकुस्थित अस्पतालमा आफैँ गएर परीक्षण गराइरहेका छन् ।
‘उपत्यकामा संक्रमित बढेसँगै त्रास भएको छ । अहिले दैनिक ३० जना आफैँ अस्पतालमा आएर नमुना परीक्षण गराइरहेका छन्,’ उनले भने, ‘विगत एक-डेढ महिनादेखि विदेशबाट आएका धेरै छन् । घरबेटी र समुदायले नै आफूलाई बस्न दिएन भन्दै धेरै मानिस आउन थालेका छन् ।’
मन्त्रालयका अनुसार मङ्गबारसम्म रियल टाइम पोलिमरेज चेन्ज रियाक्सन (पीसीआर) र र्‍यापिड डाइग्नोष्टिक टेस्ट (आरडीटी) गरी दुवै विधिबाट अहिलेसम्म १२ हजार नौ सय छ जनाको परीक्षण गरिएको छ । परीक्षणको दायरा बढाउनका लागि अहिले उपत्यकामा राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला, टेकु अस्पताल र वीर अस्पतालमा पनि पीसीआरबाट परीक्षण गरिएको छ । इपिडिमोलोजी तथा सरुवा रोग नियन्त्रण महाशाखाका निर्देशक डा. वासुदेव पाण्डेले उपत्यकामा पनि स्थानीय तहसँगको समन्वयमा विदेशबाट आएका व्यक्तिको परीक्षण गरिरहेको बताए ।
मंगलबारमात्र उपत्यकामा पीसीआरबाट तीन सय ८७ जनाको परीक्षण गरिएको छ ।